N'ọdịnihu anyị ga-ahụ 10.000 PPI OLED meziri site na Samsung | Gam akporosis
Samsung na ndị nyocha Stanford mepụtara ngosipụta 10.000 PPI OLED
Anyị chọpụtara na Samsung na ndị nchọpụta Mahadum Stanford enweela ike ịmepụta ihe ngosi 10.000 PPI OLED o Pixels kwa inch.
Anyị na-ekwu okwu banyere otu n'ime Isi ihe dị na ogo ihuenyo na nke ahụ na-eje ozi dị ka ihe atụ iji mata ogo nkọ ihuenyo. Ọ bụrụ na anyị abanye na afọ a 2020, anyị ga-aga na Sony Xperia 1 II ihuenyo iji chọta 643 PPI ma ọ bụ pikselụ kwa inch.
Ya mere, nke a bụ akụkọ na Samsung na ndị nyocha Stanford enweela ike ịmepụta ngosi OLED site na njupụta pixel nke 10.000 PPI. Yabụ anyị nwere ike ịmatakwu ihe ọ pụtaraỌbụna ihuenyo 6-anụ ọhịa nwere mkpebi nke 32K (30.720 x 17.280), agaghị enwe ike iru ihe Samsung kere mgbe ọ ruru 6.000 PPI; ukwu dị OLED dị ugbu a na ekwentị akara Korea niile.
Ikwu ntakịrị ihe na teknụzụ, ihe niile ọ bụ n'ihi ihe nkiri OLED nke ndị nyocha ji inyefe ọkụ na-acha ọcha na ọkwa abụọ na-egosipụta, yana ihe nkiri ọlaọcha na onye ọzọ nwere ọrụ maka ịbụ "metasurface". Ọ bụ otu elu a ka ejiri mara 'ọhịa nke ogidi microscopic' nke na-arụ ọrụ dị ka pikselụ nke elekere 2,4 micron nha.
Mee elu mee ala, teknụzụ a bụ enwe ike ịbawanye arụmọrụ nke ụfọdụ OLED na n’etiti ngwọta ya nwere ike daba na Ọnọdụ Virtual, na karịa mgbe ngwaọrụ VR dị ugbu a na-anọ na 800 PPI dị ka HTC Vive Cosmos. Ọ bụ ezie na ekwesịrị ịkọwa ya na ọ ga - ewe nnukwu nhazi site na ibe na GPUs; teknụzụ nke na-erubeghị na ọkwa ndị ahịa.
Ọganihu niile anyị ga - ahụ n'ọdịnihu dị nso ma na ugbu a ga - enwe njedebe nke 20.000 Mba dị ka ụlọ nke otu dị ka Samsung na Stanford University na-eme nnyocha na-enwe ọganihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na ndị nyocha Stanford mepụtara ngosipụta 10.000 PPI OLED
Jiri mkpịsị aka gị see paleti ahụ na Breakboard a la Arkanoid